Sajhasabal.com | Homeजिल्ला कै प्रमुखलाई खोई अंगरक्षक, खोई झण्डा ?
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत हुने, अब नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कति ?
सुकुम्बासी दलित परिवारलाई ४१ सय वर्गमिटर जग्गा निःशुल्क पास
दुरुपयोग सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन छुट्टै आयोग बन्ने
आजपनि मलेसिया, साउदी, कतार, युएई लगाएत देशहरुको पैसाको मुल्य बढ्यो (दररेट सहित)
जिल्ला कै प्रमुखलाई खोई अंगरक्षक, खोई झण्डा ?
प्रेम सुनार । साउन–२६, गुल्मी । स्थानिय तहको निर्वाचन पछि वरियताक्रममा जिल्ला समन्व्य समितिका प्रमुखहरु बरियता क्रममा जिल्लाका सवै भन्दा प्रमुख ओहदाका ब्याक्ति मानिन्छन । त्यस पछि सिडियो मानिन्छन् । उनिहरु दुवै जना कुनै कार्यक्रममा पुग्दा आफु भन्दा कनिष्ट मानिने सिडियो झण्डा फर्फराउँदै र गार्र्ड अगाडी पछाडी लगाउँदै पुगेका हुन्छन ।
तर जिल्ला कै प्रमुखलाई एउटा गार्ड समेत दिईएको देखिदैन् । जिल्ला पञ्चायत र पछि जिल्ला विकास समिति सम्मको अवस्था के थियो त ? भनेर हामीले गुल्मीका पुर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति चन्द्र केसी संग सोधेका थियौं ।
उनले भने–‘ उति वेलै देखि पोर्टकल मिलाएनन । सिडियोलाई गाडीमा झण्डा रखाए, गार्ड दिए हामीलाई दिएनन । हामी त्यति वेला अधिकार सम्पन्न जिल्लाको प्रमुख भई सके पछि हामीले पनि गार्डा र झण्डा राख्न पाउनु पर्छ भनेर माग गरेका थियौं, सुनुवाई भएन । अहिले खै ब्यवस्था गरेका छन, थाह छैन् । ’
कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका केसीले थपे–‘संघिय प्रणालीमा चार तहको संघियता हुन्छ । एउटा राजनैतिक संघियता हो जुन निर्वाचन गराएर सफल भयो । दोश्रो संवैधानिक संघिता हो , जुन संकट र जटिल अवस्थामा छ ।
तेश्रो वित्तिय संघियता, त्यो पनि सक्रमण अवस्थामा छ । चौथो हो प्रशासनिक संघियता त्यो झनै गाह्रो अवस्थामा रहेको छ ।’
केसीले वरियताक्रममा जिल्लाको प्रमुख भएकोले त्यस्तो ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिए । जिल्लाका विध्वान पुर्व क्याम्स प्रमुख शशी पन्थीले संघिय सरकारले यस्तो विषयमा नियम कानुन संशोधन गरेर जिल्लाको प्रमुखलाई त्यस्तो ब्यवस्था हुनु पर्ने धारण राखे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालले हाल सम्म समन्व्य समितिका प्रमुखलाई गार्ड उपलब्ध गराउने विषयमा केहि कुरा नआएको बताए । उनले भने –‘ सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राख्दै मागेमा दिन सकिन्छ । तर त्यस्तो कुरा उठेकै छैन ।’
समन्व्य समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले यो विषय उठान नौलो भएको बताए ।‘ यो विषय नौलो र ठिक हो तर अहिले सम्म यसवारे ऐन कानुन कतै केहि वोलेको छैन । अहिले सम्म आफुहरुलाई निवास मात्र उपलब्ध गराईएको छ तर खान र अन्य ब्यवस्था हामी आफ्नै खर्चले थेक्दै आएका छौं –उनले भने ।